Jilaagii Caanka ahaa Ismaacil Basbaas oo Hargeysa ku geeriyooday – Radio Daljir
Maarso 5, 2018 1:02 g 0
llaha u naxariisto waxaa magaalada Hargeysa maanta oo Isniin ah lagu aasay Hal abuurkii iyo jilaagii caanka ahaa maxuum Ismaacil Cabdi Ibraahim oo caan ku ahaa (Basbaas) oo dhowrkii sanno ee la soo dhaafay ku xanuunsanayey magaalada Hargeysa.
Aaska marxuumka ayaa waxaa ka qeybgalay dadweyne aad u fara badan oo ay wehliyaan madax ka tirsan maamulka Somaliland, sida ay ku soo warramayaan weriyayaasha ku sugan Hargeysa.
Abwaan Ismaacil Cabdi (Basbaas) waxa uu ku dhashay sannadkii 1943 meel u dhow magaalada Oodweyne, marxuumka ayaa fanka ku biiray sannadkii 1957-dii, waxaa lagu tilmaamay tiir ka mid ah wax jilidda, hal abuuridda iyo howlaha kale ee fanka nin aad ugu xeel dheer sida uu BBC-da u sheegay Saxardiid Maxamed Ismaacil oo isna ah hal abuur caan ah isla markaanna ay soo wada shaqeeyeen marxuum Babaas muddo dheer.
Wax yaabaha lagu xasuusan doonno ee dhaggaha dadka Soomaaliyeed ka go’I doonin waxaa ka mid ahaa in uu iska lahaa heestii lagu soo gali jiray Idaacaddaha Radio Muqdisho iyo Raadiyo Hargeysa wararka ee miraheeda ka mid ahaa “Allahayow waa mahaddaa” taasoo uu isaga iska lahaa”.
Mas’uuliyiinta aaskiisa ka qeybgalay waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdullaahi (Guri-barwaaqo), waxaana geeridiisa tacsiga ka dirray madaxweynaha Somaliand Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyayaasha labada xisbi iyo dad kale oo caan ah